Izihlanganisi zeshaja ye-EV
Isinxibelelanisi seTshaja ye-EV
Chwetheza 1 Isinxibelelanisi se-EV
Uhlobo lwe-2 EV Isinxibelelanisi
CCC combo 1 Iplagi
CCS combo 2 Iplagi
GB / T DC Umpu
Uhlobo lwe-2 EV Socket
Ii-CCS Combo 1 Inlets
Isokethi Sompu we-GBT
Intambo ye-EV yokutshaja
Uhlobo lwe-1 ukuya ku-2
Uhlobo lwe-2 ukuya ku-2
Uhlobo lweCandelo eli-1 eliThengisiweyo
Chwetheza i-2 Cable Tethered
Intambo ye-EV yokomoya
Intambo ye-EV kunye neKheyibhile
Ishaja ye-EV ephathekayo
Uhlobo lwe-EV Charger 1
Uhlobo lwe-EV lweshaja 2
32A Ishaja ye-EV ephathekayo
40A Ishaja ye-EV ephathekayo
Ishaja ye-3 ePhathekayo ye-EV
Isikhululo seV EV
3.6 KW Ibhokisi yeWallbox
Ibhokisi yeWallbox ye7.2KW
Ibhokisi yeWallbox ye22KW
Ishaja ekhawulezayo yeDC
Imodyuli ye-EV yetshaja
Iselfowuni DC Ishaja ekhawulezayo
Ishaja yeCCS CHAdeMO
Chwetheza 1 kuhlobo lweAdapter yesi-2
Chwetheza 2 ukuya ku-1 Adapter
I-Tesla kwi-J1772 Adapter
I-J1772 ukuya kwi-Tesla Adapter
CCS 1 ukuba CCS 2 samandla
CCS 2 ukuya CCS 1 samandla
Uhlobo lwe-A kunye nohlobo B RCD
B Uhlobo lweRCD
Chwetheza B RCBO
Umlawuli we-EPC EVSE
Iindlela zokutshaja ze-EV
Iimpawu zoMbane zoMbane
Iindidi ezahlukeneyo ze-EV Ukutshaja izihlanganisi
Zininzi izizathu zokucinga ngokutshintshela kulowo unikwe amandla ngumbane osuka kwimoto enikwe ipetroli.Izithuthi zombane zizolile, zineendleko zokusebenza eziphantsi kwaye zivelisa ukukhutshwa okuncinci kakhulu ivili. Ayizizo zonke iimoto zombane kunye neeplagi ezenziwe ngokulinganayo, nangona kunjalo. Isinxibelelanisi sokutshaja se-EV okanye uhlobo oluqhelekileyo lweplagi ikakhulu luyahluka ngokwamajografi kunye neemodeli.
Ndazi njani ukuba yeyiphi iplagi endisebenzisa isithuthi sam sombane?
Ngelixa ukufunda kunokubonakala ngathi kuninzi, kulula kakhulu. Zonke iimoto zombane zisebenzisa ikhonkco esisemgangathweni kwiimakethi zazo zenqanaba 1 kunye nenqanaba 2 lokutshaja, eMntla Melika, eYurophu, China, Japan, njl.njl. amandla umgangatho wentengiso. Izikhululo zokutshaja ze-Tesla Level 1 okanye 2 zinokusetyenziswa zizithuthi zombane ezingezo-Tesla, kodwa kufuneka zisebenzise iadaptha enokuthengwa kumthengisi wesithathu. Ukutshaja okukhawulezileyo kweDC, iTesla inenethiwekhi yokuthengisa izikhululo zeSupercharger ezinokuthi zisebenzise kuphela izithuthi zeTesla, akukho adaptha iya kusebenza kwezi zitishi kuba kukho inkqubo yokungqinisisa. Iimoto zakwaNissan nezeMitsubishi zisebenzisa i-CHAdeMO esemgangathweni waseJapan, kwaye phantse zonke ezinye izithuthi zombane zisebenzisa imigangatho yokutshaja yeCCS.
Imigangatho yaseMntla Melika Uhlobo lwe-1 Iplagi
Uhlobo lwe-1 EV Socket
Imigangatho yaseYurophu IEC62196-2 Uhlobo lwe-2 Izihlanganisi ze-EV
Chwetheza i-2 Socket Socket
Chwetheza izihlanganisi ezi-2 zihlala zibizwa ngokuba zii-'Mennekes 'izihlanganisi, emva kokuba umenzi waseJamani eyile uyilo. Bane-plug-7-pin. I-EU icebisa udidi 2 lokudibanisa kwaye ngamanye amaxesha kubhekiswa kubo ngokusesikweni IEC 62196-2.
Iindidi zonxibelelaniso ze-EV eYurophu ziyafana nezo zikumNtla Melika, kodwa kukho umahluko okhoyo. Okokuqala, umbane wasekhaya oqhelekileyo zii-volts ezingama-230, eziphindwe kabini kunokusetyenziswa kweMntla Melika. Akukho "nqanaba 1" lokutshaja eYurophu, ngenxa yeso sizathu. Okwesibini, endaweni yesinxibelelanisi i-J1772, isixhobo sokudibanisa i-IEC 62196 Type 2, esiqhele ukubizwa ngokuba ziimeneksi, ngumgangatho osetyenziswa ngabo bonke abavelisi ngaphandle kweTesla eYurophu.
Nangona kunjalo, uTesla kutshanje utshintshe iModeli 3 kwisixhobo sayo sokudibanisa ukuya kuhlobo lwe2. I-Tesla Model S kunye neemodeli ze-Model X ezithengiswe eYurophu zisasebenzisa isinxibelelanisi seTesla, kodwa uqikelelo kukuba nabo baya kuthi ekugqibeleni batshintshele kwisihlanganisi sohlobo lwe-2.
CCS combo 1 isinxibelelanisi
CCS combo 2 Isinxibelelanisi
I-CCS imele inkqubo yokuDibanisa edibeneyo.
Inkqubo yokuDibanisa edibeneyo (CCS) igubungela iCombo 1 (CCS1) kunye neCombo 2 (CCS2) iitshaja.
Ukusukela ngasekupheleni kuka-2010s, isizukulwana esilandelayo seshaja zidibanise i-Type1 / Type 2 tshaja ngesihlanganisi sangoku se-DC sokwenza i-CCS 1 (North America) kunye neCCS 2.
Umdibaniso wendibaniselwano uthetha ukuba imoto iyakwazi ukuziqhelanisa nokuba ingathatha intlawulo ye-AC ngesihlanganisi kwisiqingatha esingaphezulu okanye i-DC ngentlawulo ngokudibanisa iindawo ezi-2 ezidityanisiweyo. Umzekelo, ukuba unayo i-CCS Combo 2 socket emotweni yakho kwaye ufuna ukutshaja ekhaya kwi-AC, umane ufake iplagi yakho yohlobo yesi-2 kwisiqingatha esingaphezulu. Inxalenye esezantsi yeDC yesinxibelelanisi ihlala ingenanto.
E-Yurophu, i-DC ekhawulezayo ukutshaja iyafana naseMntla Melika, apho i-CCS ikumgangatho osetyenziswa ngabo bonke abavelisi ngaphandle kweNissan, Mitsubishi. Inkqubo yeCCS eYurophu idibanisa isinxibelelanisi sohlobo 2 kunye nokususa izikhonkwane ezikhawulezayo njenge-J1772 ikhonkco eMntla Melika, ke ngeli xesha ikwabizwa ngokuba yiCCS, sisidibanisi esahlukileyo. Imodeli yeTesla 3 ngoku isebenzisa isinxibelelanisi seCCS saseYurophu.
I-Japan esemgangathweni ye-CHAdeMO Isinxibelelanisi kunye ne-CHAdeMO Inlet Socket
I-CHAdeMO: Isixhobo seJapan se-TEPCO siphuhlise i-CHAdeMo. Ngumgangatho osemthethweni waseJapan kwaye phantse zonke iijapan DC ezitshaja ngokukhawuleza zisebenzisa ikhonkco ye-CHAdeMO. Yahlukile eMntla Melika apho iNissan neMitsubishi kuphela komenzi abathengisa izithuthi zombane ngoku ezisebenzisa ikhonkco le-CHAdeMO. Ekuphela kwezithuthi zombane ezisebenzisa uhlobo lwe-CHAdeMO EV yokutshaja isinxibelelanisi yiNissan LEAF kunye neMitsubishi Outlander PHEV. UKia uyeke u-CHAdeMO ngo-2018 kwaye ngoku ubonelela ngeCCS. I-CHAdeMO izihlanganisi azabelani ngenxalenye yesinxibelelanisi kunye ne-J1772 inlet, ngokuchaseneyo nenkqubo yeCCS, ke zifuna ukongezwa kweChadeMO emotweni Oku kufuna izibuko elikhulu lokuhlawulisa
Isinxibelelanisi seTvla Supercharger EV kunye neTesla EV Socket
I-Tesla: I-Tesla isebenzisa iNqanaba 1 elifanayo, iNqanaba 2 kunye ne-DC yokutshaja izihlanganisi ngokukhawuleza. Sisidibanisi seTesla esamkelekileyo esamkela onke amandla ombane, njengoko eminye imigangatho ifuna, akukho mfuneko yokuba nesinye isinxibelelanisi ngokukodwa esihlawuliswa iDC ngokukhawuleza. Zizimoto zeTesla kuphela ezinokusebenzisa iitshaja zazo ezikhawulezayo zeDC, ezibizwa ngokuba ziiSupercharger. I-Tesla ifakwe kwaye igcina ezi zikhululo, kwaye zisetyenziselwa kuphela abathengi beTesla. Nokuba ngentambo yeadaptha, ngekhe kubize ukutshaja i-non-tesla EV kwisikhululo seTesla Supercharger. Kungenxa yokuba kukho inkqubo yokungqinisisa echaza isithuthi njengeTesla ngaphambi kokuba inike amandla amandla. Ukutshaja i-Tesla Model S kuhambo lwendlela nge-Supercharger kunokongeza kangange-170 yeemayile zoluhlu kwimizuzu nje engama-30. Kodwa inguqulelo ye-V3 yeTesla Supercharger inyusa amandla avela kwi-120 kilowatts ukuya kwi-200 kW. IiSupercharger ezintsha neziphuculweyo, ezisungule ngo-2019 kwaye ziyaqhubeka nokukhupha, zikhawulezisa izinto ngeepesenti ezingama-25. Ewe, uluhlu kunye nokutshaja kuxhomekeke kwizinto ezininzi-ukusuka kubungakanani bebhetri yemoto ukuya kwisantya sokutshaja kwitshaja, kunye nokunye-ukuze "imayile yakho ingahluka."
Isixhasi seChina GB / T EV
China GB / T DC Isinxibelelanisi
I-China DC GB / T Isokethi yokungena
I-China yeyona ntengiso inkulu- kude kube ngoku-kwizithuthi zombane.
Baye bavelisa eyabo inkqubo yokutshaja, ekubhekiswa kuyo ngokusesikweni yimigangatho yabo yaseGuobiao njenge: GB / T 20234.2 kunye ne-GB / T 20234.3.
I-GB / T 20234.2 igubungela ukutshaja kwe-AC (inqanaba elinye kuphela). Iiplagi kunye neziseko zijongeka njengohlobo lwe-2, kodwa izikhonkwane kunye nee-receptors zibuyisiwe.
I-GB / T 20234.3 ichaza indlela ukutshaja kwe-DC okukhawuleza ngayo. Inye kuphela inkqubo yokutshaja ye-DC kwilizwe lonke e-China, endaweni yeenkqubo ezikhuphisanayo ezinje nge-CHAdeMO, CCS, Tesla-modified, njl., Efumaneka kwamanye amazwe.
Into enomdla kukuba, uMbutho wase-Japan osekwe kwi-CHAdeMO kunye ne-China Electricity Council (elawula i-GB / T) basebenza kunye kwinkqubo entsha ye-DC ekhawulezileyo eyaziwa njenge ChaoJi. Nge-Epreli 2020, babhengeza iinkqubo zokugqibela ezibizwa ngokuba yi-CHAdeMO 3.0. Oku kuyakuvumela ukutshaja ngaphezulu kwe-500 kW (umda wee-amps ezingama-600) kwaye iya kubonelela ngokutshaja ngokwamacala amabini.Ukujonga iTshayina kungoyena mthengi mkhulu wee-EVs, kwaye uninzi lwamazwe engingqi anokujoyina kubandakanya i-India, inyathelo le-CHAdeMO 3.0 / ChaoJi linokuthi liyicime i-CCS ekuhambeni kwexesha njengamandla aphambili ekuhlawuliseni.
I-Shanghai Mida EV Power Co., Ltd.yinto ephezulu yokuvelisa izixhobo zombane ezitshaja izixhobo zombane, kubandakanya zonke iindidi ze-EV Connector kunye ne-EV Charger Socket, ii-EV Ukutshaja iintambo ...
© Copyright - 2018-2021: Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. Onke amalungelo agciniwe
Ingqungquthela ye-34 yeHlabathi yeZithuthi zombane yeHlabathi (EVS34） Julayi-09-2021
Intengiso yeNtengiso yeentengiso ze-Global Global (2021 ukuya ku-2027) ... Ngomhla-31-2021
I-CCS yaseYurophu (Uhlobo lwe-2 / iCombo 2) yoyisa umhlaba ... Ngomhla-23-2021
Yongeza: Hayi. 377 yeChengPu Road, kwiSithili seFengxian iShanghai 201499, China
Ifowuni: + 86-18221956895